Cabdi Wali Gaas oo War deg deg ah ka soo saaray Guusha Donald Trump - Hablaha Media Network
Cabdi Wali Gaas oo War deg deg ah ka soo saaray Guusha Donald Trump
HMN:- Madaxweynaha Puntland Mudane Cabdi wali Gaas ayaa hamblayo u diray Donald Trump oo noqday Madaxweynahii 45-aad ee soo mara Dalka, kadib markii uu ka guuleystay Hillary Clinton.
Cabdi wali Gaas Madaxweynaha Puntland ayaa ugu horeyn hambalyo gaar ah u diray Madaxweynaha cusub ee Dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhamaan shacabka Dalka Mareykanka oo doortay Madaxweynaha 4-ta sano ee soo socota hogaamin doona Mareykanka.
“Waxaan hambalyo farxad leh u dirayaa Donald Trump oo noqday Madaxweynahii 45-aad ee soo mara Dalka Mareykanka iyo dhamaan shacabka Dalka Mareykanka oo doortay Madaxweynahooda cusub” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland .
Cabdi wali Gaas ayaa Madaxweynaha Dalka Mareykanka ugu baaqay in uu xoojiyo xiriirka ka dhaxeeya Dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka, sidoo kalena uu sii wado taageerada Mareykanka uu siinayo Soomaaliya.
Donald Trump ayaa noqonaya ninkii ugu horeeyay oo maalqabeen ah ee ku guuleysta Madaxtinimada Dalka Mareykanka, kadib markii uu helay codad gaaraya 276 cod, halka Hillary Clinton oo la tartamaysay ay heshay 218 cod.